Galaxy S8 အသစ်သည်မည်မျှခက်ခဲသနည်း။ | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | မိုဘိုင်း, Samsung, လဲ tutorial
ကျွန်တော်တို့ကွေးကောက်မျက်နှာပြင်ပါတဲ့ကိရိယာအသစ်တစ်ခုကိုတွေ့တိုင်းလေထဲမှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိနေတယ်။ မျက်နှာပြင်ကအားကောင်းနေမလား။ ချိုးဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ? ငါတို့အားလုံးသဘောတူတယ် ကွေးသောမျက်နှာပြင်ပါသည့်စမတ်ဖုန်း၏ဒီဇိုင်းသည်တကယ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ဒီထက်ပိုပြီးဒါကဒီ curved screen ကို frameless design နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ။
ဘောင်များမရှိခြင်းနှင့်ဖုန်း၏ရှေ့မျက်နှာပြင်အားအစွန်းဘက်သို့ပို့ဆောင်နိုင်ခြင်းသည်အလွန်သာယာသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤအခြေအနေများ၊ ကောင်းမွန်သောဗေဒအပြင်ထပ်မံဆိုးရွားလှသည်။ ဤကွေးနေသောဖန်သားပြင်များသည်ရေတံခွန်အတွက်သံလိုက်ဖြစ်သည်။ AND ဤဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည့်စက်တစ်လုံးသည်မြေပေါ်သို့ကျလျှင်၎င်း၏မျက်နှာပြင်သည်ပျက်စီးမှုအများဆုံးဖြစ်သည်.
1 Galaxy S8 မျက်နှာပြင်သည်ကောင်းမွန်သောပျက်စီးလွယ်သောအဆင့်ကိုရရှိသည်
2 Galaxy S8 ကိုကြံ့ခိုင်သောပစ္စည်းများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်
Galaxy S8 မျက်နှာပြင်သည်ကောင်းမွန်သောပျက်စီးလွယ်သောအဆင့်ကိုရရှိသည်
ကျွနုပ်တို့ပိုက်ကွန်တွင်ရှာတွေ့နိုင်ပြီ ဆမ်ဆောင်းမော်ဒယ်သစ်တွင်အမျိုးမျိုးသောခုခံမှုစမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်သောဗီဒီယိုမြောက်မြားစွာ။ သာမာန်အားဖြင့်၊ စမတ်ဖုန်းများသည်စမ်းသပ်မှုအဆုံးတွင်ရှိသောအရာဝတ္ထုသည်တူညီသည်။ တစ် ဦး ကခြစ်ဖုန်း, အက်ကွဲမျက်နှာပြင်, ဒါမှမဟုတ်လုံးဝကိုရိုက်ချိုး, လုံးဝ။ သို့သော် Galaxy S8 သည်မည်မျှအထိသိုလှောင်နိုင်မည်ကိုအချက်အလက်များရရှိသောနေရာဖြစ်သည်။
အဲဒါကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ် Galaxy S8 သည်မည်သည့်ဗားရှင်းတွင်မျှမနှစ်ဆပါ။ ကိရိယာကိုကျွန်ုပ်တို့၏လက်များဖြင့်ကြိုးပမ်းနိုင်သည် အနိုင်နိုင် flexa။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ခံစားရလိမ့်မည်ဟုမထင်ထားပါ။ မည်သည့်ပုံသဏ္formationာန်ကိုမဆိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏အိတ်ကပ်ထဲ၌ထားနိုင်သည်။
တိုင်းတာရန်ဖျော်ဖြေစမ်းသပ်မှု၌တည်၏ ခြစ်ရာခုခံ၏အဆင့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဒေတာကိုပေးသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေအမျိုးမျိုးသောပွန်းပဲ့ခြင်းအမျိုးအစားများကိုမတူညီသောချွန်ထက်သောအရာဝတ္ထုများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ရလဒ်ကတော့ဒါပဲ Galaxy S8 ရဲ့ရှေ့မျက်နှာပြင်ကကောင်းကောင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ဖုန်းကိုအိတ်ကပ်ထဲထည့်လိုက်တာကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဒါဟာအချို့သော့သို့မဟုတ်ဒင်္ဂါးပြားနှင့်အတူဒီ၏ panel ကိုပုံရသည် Corning Gorilla Glass ကို5မပျက်စီးရ။
Galaxy S8 ကိုကြံ့ခိုင်သောပစ္စည်းများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်
ဖန်ခွက်ဘောင်၏နောက်ခံနှင့်နောက်ကျောတို့၏ခံနိုင်ရည်သည်တစ်နေ့နှင့်တစ်နေ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောခြစ်ရာများအထိအနည်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိသည်ကိုသိရခြင်းကကောင်းသည်။ Samsung သည်သတ္တုကိုဖန်သားဖြင့်ဖုံးအုပ်ရန်ကြိုးပမ်းရာတွင်၎င်းသည်အိမ်စာကိုကောင်းစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူသည်စိတ်ပူစရာမလိုလောက်အောင်ခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းခုခံနိုင်မှုအနေဖြင့်လည်းဤဒီဇိုင်းသည် အသေးစိတ်ကို၏စုံတွဲတစ်တွဲအတွက်ရပ်တန့်. သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကင်မရာမှန်ဘီလူးကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်အနားစွန်းသည်တူညီသောခုခံမှုမရှိပါ ကြွင်းသောအရာထက်။ ဒါကြောင့်သူကပစ္စည်းကိုအလွန်ရုပ်ဆိုးစေလိမ့်မည်ဟု wear ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ နိမ့်ကျပွန်းပဲ့သော tools များနှင့်အတူစမ်းသပ်ခြင်းအားဖြင့်ဤသတ္တုအစွန်းမကြာမီပျက်စီးမှုကြုံတွေ့နေရသည်။
လက်ဗွေဖတ်စက်အတွက်လည်းအလားတူပဲ။ ကင်မရာဘေးတွင်သူ၏ရပ်တည်မှုအတွက်အစမှအစများစွာဝေဖန်ခဲ့သည်။ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့မော်ဒယ်ပေါ်လောင်းကြေးလိုနေရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ခြေရာကိုကင်မရာမှန်ဘီလူးကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာထည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မှာလဲ။ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တည်နေရာကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမှတပါး, ကဖုံးလွှမ်းသောပစ္စည်းသာ။ ကြီးမြတ်ထိခိုက်လွယ်ပြသထားတယ်.
ခြွင်းချက် မှလွဲ၍ Samsung ဖန်သားပြင်ပြားများတွင်ခုခံနိုင်မှုကိုရရှိရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည်အကျိုးအမြတ်ကောင်းများရရှိခဲ့ကြောင်းထင်ရှားသည်။ ဖုန်းရဲ့အစွန်းကိုလည်းသတ္တုပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်မိသားစုတစ်ခုလုံးတွင်ထုံးစံရှိသည်။ ထိုအခါစမ်းသပ်ပြီးပြီးနောက်ပုံရသည် အလွယ်တကူခြစ်မဟုတ်ပါဘူး.
ဆိုလိုသည်မှာပုံမှန်နေ့စဉ်သုံးခြင်းဖြင့်စိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းသောယိုယွင်းမှုမဖြစ်သင့်ပါ။ ဓါးဖြင့်စမ်းသပ်သည့်အခါ၎င်းသည်ပျက်စီးသွားသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဤပစ္စည်းများသည်မည်မျှခံနိုင်ရည်ရှိသည်ကိုတိုင်းတာရန်လုပ်ဆောင်ပေးသောအရာလည်းဖြစ်သည်။ အတိအကျ, Samsung ၏ထိပ်တန်းထိပ်သစ်သည်ပျော့ပျောင်းလွန်းလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုထင်ရသည်, သင်သည်ငါတို့နှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီကျော်ကြားတဲ့ခုခံစမ်းသပ်မှုတွေကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ။ သာမန်အရာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းအသစ်များသည်အလွန်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်းမဟုတ်ပါ။ မီး၊ ရေ၊ ရေတံခွန်၊ ဓါးသွား ... ဒါပေမယ့်မိုဘိုင်းဖုန်းသစ်မှာပြproblemsနာတွေရှိနေမှာကိုစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲအေးအေးဆေးဆေးသွားနိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Galaxy S8 အသစ်သည်မည်မျှခက်ခဲသနည်း။
ချိုမြိန်သော somoza ဟုသူကပြောသည်
Dulce somoza သို့ပြန်သွားပါ
Android Alert!, ransomware ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ။